Ihe dị n'ime China na -agbagha akpa akpa FIBC na ndị na -emepụta pallet na ndị na -ebubata ya Wode
A na -eji akpa nkuku arụ igbe akpa FIBC nke na -adabaghị adaba iji dochie akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ ozugbo ha juputara n'oge njem na nchekwa. A na -eme mkpọtụ nkuku iji mee ka ihe ndị ahụ eburu na -aga nke ọma banye na ntụzịaka niile, mana na -egbochi akpa ahụ ịgbasa na usoro a. Tụnyere akpa ndị na-adịghị agbagha, ha na-echekwa ebe nchekwa ma belata ọnụ ahịa njem site na 30%. Yabụ na ha bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa FIBC ndị a eburu na oghere pere mpe. Enwere ike ịme akpa agbagọ ka ọ dabara na pallet, ọkachasị na mbupu akpa, ka na -ejigide ụdị mbụ ha. Enwere ike iji ha bufee kemịkalụ, mineral, ọka na ihe ndị ọzọ n'ụzọ akụ na ụba na enweghị nsogbu.
Nkọwa nke Baffle FIBCs
• FIBC nwere ike ịbụ 4-panel, U-panel ma ọ bụ tubular na-ewu.
• Akwa ahụ: 140gsm ruo 240gsm nwere 100% polypropylene na-amaghị nwoke, ọgwụgwọ UV, mkpuchi uzuzu, mgbochi mmiri dị na nhọrọ;
• loops loops ma ọ bụ loops cross loops dị na nhọrọ
• Ịgbapụta ihe n'olulu nwere eriri dị na nhọrọ
• stkwà ndị China, akwa agbụ agbụ abụọ, akwa mkpọchi dị na nhọrọ
• nkwalite mbupu/akpa kacha
Ị chọrọ nnukwu akpa nwere ihe mgbagwoju anya?
Ọ dabere na ngwaahịa na ngwa gị. Dịka, a na -ejikarị akpa buru ibu na -agbagwoju anya maka ihe dị mma na ụlọ ọrụ kemịkalụ na nri. Enwere ọtụtụ uru gụnyere:
1.Ndị na -echekwa ngwa ngwa na ụlọ ahịa
2.Mmeziwanye ihe owuwu ụlọ
3.Ife njikwa na ibufe
Osote: Nnukwu akpa UN FIBC maka ihe dị ize ndụ
Nke gara aga: Cross cross loops tubular FIBC jumbo akpa